Akụkọ - POPS A Dent, DIY Dent and Ding Removal Kit
Ọ bụ ọsọ maka ụgbọ ala ịdaba na sag na usoro ojiji. Ihe mbụ ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala na-eche bụ imezi onwe ha. N'oge a, ha kwesịrị iji aka nke ụgbọ ala rụzie. Onye na-agba ụgbọ ala maka ịrụ ọrụ sag adịghị ọnụ ma dịkwa mfe iji.
Ọ dị mkpa iji hichaa akụkụ ahụ dara tupu ị rụzie akụkụ ụgbọ ala ahụ dara, ka ị wee nwee ike ijigide mmetụta dị mma nke ọkpọ ahụ. Mgbe ahụ tinye ihe nkedo pụrụ iche n'ime egbe gluu, gbanye ike ma kpoo ihe dị ka nkeji 5. Na usoro preheating, enwere ike ịhọrọ ọnọdụ kwesịrị ekwesị nke iko mmiri na iko nnabata dị ka ogo ịda mba. Nnukwu iko mmiri ahụ bụ, ikike traction ka ukwuu. N'ozuzu, a na-ekpebi ọnọdụ nrapado nke iko mmiri dịka ọdịdị nke ịda mba, na mpaghara nke ịda mbà n'obi na-ahọrọkarị ọnọdụ dị iche iche maka iko ntanye. Mgbe ị gụchara egbe ahụ, kpoo iko mmiri ahụ na egbe gluu, gbanye ya ngwa ngwa na ọnọdụ concave, ma jiri nwayọ pịa ya ruo mgbe a ga-edozi iko ahụ. Mgbe ahụ mezie oghere dị n'etiti akwa traction ahụ na iko mmiri ahụ, tinye mkpụrụ na mkpanaka ịghasa nke iko mmịpụta ma mee ka o sie ike. Mgbe ahụ, gbanye mkpụrụ osisi ahụ mgbe niile wee jiri ntakịrị ike dọpụta ya ruo mgbe a ga-akụda mmụọ. Mgbe emezigharị ahụ, wepụ ihe ahụ, wepụ iko mmiri ahụ n'ahụ, wee fesa mmanya na-egbu mmiri na mmiri fọdụrụ. N'oge a, ị nwere ike ikpebi mmetụta nke mmezi dent na anyanwụ!
Ihe edere n'elu bụ otu esi eji igwe ihe eji arụ ọrụ ụgbọala. Ojiji nke igwe eji arụzi ụgbọala enweghị ike ịkwado nrụzi nrụzi, ọ bụghịkwa dents niile nwere ike idozi ya. Ihe igwe nwere adabara naanị maka ịrụzi dents dị nwayọ nwayọ. Dfọdụ nkụji nwere ọdịdị buru ibu ma ọ bụ nke na-adịghị mma mgbe niile kwesiri ka eji ngwaọrụ ndị na-edozi ya rụzie ya. Ọ bụrụhaala na agba ahụ apụtaghị na omimi dị omimi dị n'ime ebe a na-edozi edozi, enwere ike idozi ya na-enweghị eserese. Ozugbo agba ahụ mebiri, ị nwere ike ịga ụlọ ahịa mmezi akpaaka naanị maka eserese mpempe akwụkwọ!
Post oge: Jul-16-2021